13 Dec, 2014 - 14:12	 2014-12-13T14:25:58+00:00 2014-12-13T14:25:58+00:00 0 Views
MAKADII? Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye. Anoda ngaandibate pa0774 815 140.*****
Ndiri mukadzi ane makore 21 ndakamboita mwana asi handina mwana wacho, ndiri kutsvagawo murume anondida ari pachokwadi ane makore 24-37. Ngaave anoshanda uye ari negative anoda kunoongororwa ropa. Varume vevanhu kwete, andifarira ndibate pa0783 678 783.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora anoda zveimba. Ngaandibate pa0775 592 337.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana 3 ndinodawo murume mukuru kwandiri, isiri mbavha uye anobvuma kuti ndinoona kumba kwake. Anoda kuchengetwa neni aiwa, ndatambura kutsvaga murume ari pachokwadi. Vanoda fonai pa0773 140 935, kunyanya vanopinda positori yekwaMugodhi.
Ndiri mukadzi ane makore 39 okuberekwa nevana vaviri, ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Vanoda ndibatei pa0782 953 181.
Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vaviri ndinodawo murume asina mukadzi ane makore 50 — 55. Akavimbika uye asina chirwere ngaandibate pa0714 598 259.
Ndiri murume ane makore 39 ndinoda mukadzi ane makore 20 kusvika 28 ane mwana 1 kana asina. Anondibata pa0713 675 928 asi kubhipa kwete, ndinoita basa remawoko.
Ini ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 3, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ari positive ane makore 42 kusvika 46. Nhamba dzangu 0716 543 627.
Ini ndiri mudzimai ane makore 39 nevana vaviri ndiri kutsvaga murume ane makore 39 kusvika 45 ari pachokwadi anoda zvekuroora asi ane mukadzi kwete usambofona hako. Ndibatei pa0771 177 168 kana paWhatsApp ndiripo.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinoda musikana wekudanana naye ane makore 18. Nhare dzangu 0776 926 965, call me back kwete uye sms chete.
Ndiri murume ane makore 32 ndiri kutsvaga musikana ane makore 23-28 asati amboroorwa nekuti ini handisati ndamboroora. Handidi kutambwa neni, ari pachokwadi ndibate pa0735 036 916 vari muHarare kana Norton.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi hazvina kuita. ndiri musikana ane makore 20, HIV positive uye ndiri kutsvaga mukomana ane makore 25 wekushamwaridzana naye ari positive, anoshanda anoenda kuchechi. Anoda nezvangu ngaandibate pa0739 523 119.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nevana vaviri ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi. Andifarira ngaafone kana kutumira sms pa0783 691 503.
Ini ndiri mukomana ane makore 21 okuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 19 zvichidzika wekuroora. Munondibata pa0771 747 447 kana kutumira sms.
Ndine makore 31 uye ndiri kutsvagawo musikana wemakore 18-28 ane mazirudo ekupenga chaiwo wekugarisana naye ari pachokwadi. Ndinoitwa Takudzwa ndinogara kuSouthlea Park muHarare, munondibata pa0737 016 778.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 36 nevana 2 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 26 zvichidzika. Anoda anondibata pa0716 359 573.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinodawo musikana ane makore 23-28 anoda kuti tironge ramangwana redu pamwe chete. Vanoda ndibatei pa0733 680 996.
Ndiri mukomana ane makore 19 ndiri kudawo musikana ane makore 18 asina chero chirwere. Ndinonzi Bea Gosai, nhamba dzangu 0778 086 047.
Ndiri murume ane makore 28 ndinodawo musikana ane makore 20 – 25 anoda zvemba mutsvuku uye akanaka asina kusimba. Nhare yangu 0734 304 819.
Makadi­i veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nemwana mumwe ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anoshanda ari HIV negative. Ndibatei pa0772 586 989.
Ini ndiri mukomana ane makore 27 ndotsvagawo musikana ane makore 24 zvichidzika. Vanoda ndibatei chero paWhatsApp pa0734 271 155.
Ndiri mukomana ane makore 18 ndodawo shamwari (penpals), kunyanya vakomana vanodzidza. Mondibata pa0783 575 613.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvaga musikana asina chirwere seni ane makore 18-20. Anoda ngaandibate pa0783 892 982.
Munofara here? Ndiri mukomana ane makore 29 ari kutsvagawo musikana ane makore 25 zvichidzika. Ndinogara muHarare, andifarira anondibata pa0773 792 346.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 ndiri kutsvagawo mudzimai wekuroora ane makore ari pakati pe33 – 36 ane vana vake. Ngaave ari HIV negative, ini ndinoshanda uye ndiri kuManicaland. Nhamba dzangu 0774 136 333.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndinotsvagawo murume ane makore 45 – 55 anonamata uye anoda zvemusha. Ndibatei pa0716 886 848.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvagawo musikana wekuwadzana naye ane makore 22 zvichidzika akazvipira kuroorwa. Ndinoshanda anoda nhare dzangu 0712 540 413.
Ndiri kutsvaga mukadzi akatsvinda ane rudo, anoshanda ari HIV negative. Ndaneta nekunyeperwa, vari kuziva zvavanoda ngavandibate pa0776 581 278.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndiri HIV negative uye ndinoshanda muHurumende. Ndinotsvagawo musikana wokuroora ane makore 22 zvichidzika. Ngaandibate pa0716 398 037.
Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi nezvekuda musha. Vanoda fonai pa0783 951 170.
Makadii veKwayedza? Pane vachiri kufona pa0783 564 471 chiregai nekuti ndakamuwana wandaida. Makarwa kurwa kwakanaka, ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvakawo mukadzi wokuroora akavimbika anonamata ari HIV positive. Nhamba dzangu 0779 516 596.
Makadini zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 2 ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ari pachokwadi. Ngaandibate pa0779 789 571.
Ndinotsvakawo musikana ari pachokwadi anoda zvekuroorwa mushure mekunge tadanana tanyatsozivana ane makore 19. Ndakapasa 0-Level uye ndichiri kutsvaga basa. Nhamba dzangu 0775 395 680.
Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana 1 ndinotsvaga murume ane makore 30 kusvika 35 anoshanda asina mukadzi ari HIV negative. Ngaandibate pa0773 897 123.
Ndiri mukadzi ane makore 37 ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi asina mukadzi ane makore 40-45. Nhamba dzangu 0775 861 883.
Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvaga mukadzi ane makore 22-30 anoda zvemba. Ndinogara kumusha kwaMurehwa, anoda anofona pa0734 047 236 asi vanonyepa kana vanoda kutamba kwete.
Ndiri muchinda ane makore 26 anoda shamwarikadzi yekuwadzana nayo kubva pamakore 20 zvichidzika. Vanotapirirwa fonai pa0737 461 388.
Makadii? Ndiri murume ane 33 ndinotsvagawo musikana ave kuda zvemba anogara muHarare asina mwana, ane makore 30 zvichidzika. Sms pa0775 543 556.
Ndinotenda nechirongwa chenyu chakanakisa, wandaida ndakamuwana saka vamwe chiregai henyu kuchaburitsa nhamba dzangu dzinoti 0778 772 221. Ndatenda.
Ndiri murume ane vana 3 ndinodawo mukadzi anoda musha uye kuroorwa, ngaave ane mwana 1 kana asina mwana aine makore 18-28. Ari HIV negative ngaandifonere cherro nguva pa0782 049 160.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 38, HIV positive uye ndinodawo shamwarirume yakaita seni, yakavimbika inoda kuvaka musha. Vana vadiki musafone zvenyu, nhamba dzangu 0777 515 955.
Ndinodawo musikana ane makore 18 – 20 anoda zvemba asina chirwere. Ndinonzi Bea Gosai, nhamba dzangu 0778 086 047.